Mass Media mankany amin'ny tambajotra sosialy marobe = TSY mahomby | Martech Zone
Mass Media mankany amin'ny tambajotra sosialy marobe = TSY mahomby
Sabotsy, Janoary 26, 2008 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Ny olona sasany mino izany fisaka izao tontolo izao noho ny Internet. aho tsy miombon-kevitra.
Mety ho saritaka izao tontolo izao raha ny fahitany ny angona… fa ny tena izy dia mbola fanamby tsy mampino ny elanelan-tany eo amin'ny olona. Miara-miasa amin'ny ekipa iray any India aho ary afaka milaza aminao fa, na dia manan-talenta mampino aza ny vondrona, ny fifandraisana sy ny fametrahana fepetra takiana voafaritra tsara sy ny laharam-pahamehana dia zava-dehibe kokoa noho ny banga eo amin'ny toerana. Miasa mafy izahay sy ny ekipako mba hifampiresaka tafaraka.
Tsy te hiara-miasa amin'ny olon-kafa ankoatry ny ekipako ankehitriny aho, fa miantso ny filatsahan'ny fihaonambe, ny adin'ny fialantsasatra, ny fe-potoana, ny fiteny… ireo rehetra ireo dia mitondra fanamby izay manala ny vokatra azo hananana raha tao amin'ny efitrano manaraka. Izao tontolo izao dia tsy fisaka.
Anio hariva aho dia nahazo fanasana ho an'ny Fast Company beta, izay anombohan'ny magazay tranonkala tambajotra sosialy midadasika sy matanjaka amin'ireo mpankafy nyasin'izy ireo. Hanampy beta hizaha toetra ny fampiharana indray mandeha isan-kerinandro aho - saingy mino aho fa manjombona fotsiny ny hoavin'ny tamba-jotra.
Raha mbola mandray anjara amin'ny Fast Company aho, ny tena izy dia mbola mipetraka sy miasa any Indianapolis, Indiana aho. Heck, manana mpamaky ny bilaogiko aho izay miasa eo amin'ny ilany andrefan'ny tanàna izay tsy afaka nifandraisako sy niara-niasa tamiko tao anatin'ny enim-bolana lasa izay. Toerana, toerana, toerana… izany rehetra izany.
Ka - andao lazaina fa ilaozako ny ezaka ataoko amin'ny tambajotra Indiana kely kokoa ary miasa mba hametrahana tambajotra sy fifandraisana matihanina amin'ny Fast Company. Handray soa ve aho? Heveriko fa tsy izany. Tsy zakako ny manao zigzag manerana ny firenena, ary tsy te-hamoy io fotoana sarobidy io aho.
Shel nanidy ahy tamin'ny andro lasa ho lehilahy tokana twitter any Indiana. Tsy mazava ho azy aho, saingy fantatro fa ny toerana misy ahy ara-jeografika dia nametra ny fitaomana nananan'ny bilaogiko ary koa ny fitaomako teo amin'ny indostria.
Alohan'ny hanombohanao manontany tena dia hampahafantariko anao fa tsy mikasa ny hifindra mandritra ny taona maro aho. Ny zanako lahy dia mpianatra nahomby tokoa tao amin'ny IUPUI ary ny zanako vavy 13 taona ary hamono ahy raha namindra azy tany amin'ireo namany, amboarampeo, klioban'ny boky isan-taona, sns eto Greenwood, Indiana aho. Raha vantany vao tsy ao an-trano izy ireo ary irery, dia homeko eritreritra matotra izany.
Vitsy dia vitsy amintsika no miaina sy miasa manerantany. Angamba vitsy noho ny sasany amintsika no maniry mafy izany. Izao tontolo izao, raha ny fahitantsika azy, dia eo an-toerana ary hanohy hiasa sy honina eo an-toerana isika. Manangana finamanana eo an-toerana, tambajotram-barotra eo an-toerana ary mahazo karama eo an-toerana. Izany no mahatonga ny tambajotran-tserasera malalaka toy ny Fast Company ho resy fotsiny - tsy noraharahiany ny jeografia ho zava-dehibe amin'ny tambajotra.
Ary koa, Fast Company dia tsy hanaiky velively ny fomba fanatanterahana ny asa eo an-toerana. Ny hoosiers dia manana fomba fanao amin'ny orinasa tena hafa. Izahay dia mpinamana amin'ireo mpifaninana matetika ary mizara ny haren'olombelona sy ny talenta manerana ny faritra. Indiana kely kokoa dia nanomboka herinandro lasa izay ary efa mihabe ny fifamoivoizana any amin'ny faritra maro amin'ireo orinasan-tserasera 'marobe' miorina.
Mandrapihaona ao Indiana kely kokoa! Miala tsiny, Fast Company!
Tags: fikendrena ny toetrandro
Fahatakarana ny R amin'ny CRM
Jan 27, 2008 ao amin'ny 1: 28 AM
Ny rivotra fotsiny no nodiaviko ary ity no novakiako.
voaozona tsy hahomby.
TSY misy fomba fanaratsiana mivantana anao io fa fifanarahana feno tanteraka aminao.
Tambajotra sosialy hafa? Groan… Puh-lease. Moa ve tsy efa manana ny ampy isika. Efa leo ny Facebook aho, ny My Space dia toa tanin-tany html 1996.
Miatrika ny tambajotra sosialy be loatra ny Internet. Omeo fiatoana aho, mampatsiahy ahy vokatra vaovao ho an'ny Indostrian'ny Real Estate izay ahafahan'ny agents iray mamorona tambajotran-tserasera ho an'ny mpanjifa sy ny mpanjifa mety ho afaka mifampiresaka ary miatrika azy ireo foana ireo maso.
Ny valinteniko dia hoe "inona ny antony?" ny mpanjifanao dia tsy tonga amin'ny tambajotran-tseraseranao. Raha te hahomby amin'ny marketing amin'ny tambajotra sosialy ianao dia tokony hifandray / handray anjara amin'izy ireo amin'ny tambajotra sosialy safidiny.
27 Jan 2008 amin'ny 12:11 PM
Manaiky tanteraka izahay, Loren. Fampitandremana tsotra izao ho an'ireo orinasa rehetra mieritreritra fa tsy maintsy mitsambikina ao anaty tambajotra Social Networking izy ireo mba hamonjy ny fisian'izy ireo tranonkala. Herinandro vitsivitsy izao dia hivoaka vola aman-taonina ho an'ny fampandrosoana izy ireo ary hikorontana ny lohany manontany tena hoe maninona no tsy mandeha izany.
Tsy ny teknolojia na tranokala mahasarika ny vahoaka fotsiny akory, fa ilay tambajotra izay manisa - iza, aiza… ary ny ankamaroany MANAHY ?!
27 Jan 2008 amin'ny 2:09 PM
Ie, manaiky ihany koa aho.
Ny fiparitahan'ny tambajotra sosialy dia manakaiky ny tokonam-baravaran'ny ad nauseum.
Ny zavatra iray hotanisiko dia ny niasako tany India nandritra ny 3 taona (tsy niaraka tamin'ny olona tany India, fa tany Rajasthan), ary ny ankamaroan'ireo olana nolazainao ireo dia noho ny olana goavana momba ny firafitr'asa. Izany hoe ny herinaratra mivoaka tampoka farafahakeliny im-betsaka isan'andro!
Ary koa, tsy fantatro fa avy any Indy ianao. Izaho koa. Niakatra tamin'ny lalana Rockville aho, ary niresaka momba ny IUPUI - Tany koa no nandehanako nianatra!
Na izany na tsy izany, lahatsoratra tsara. Heveriko fa be dia be ny olona ao amin'ny tontolon'ny bilaogy no somary may kely amin'ireo karazana tambajotra sosialy be loatra ireo.
28 Jan 2008 amin'ny 12:50 PM
27 Jan 2008 amin'ny 4:38 PM
Heh. Toa xenophobia manokana ho an'i Hoosier io amiko… 😉
Fa matotra… lahatsoratra tsara. Miasa amina tetikasa lehibe lavitra aho ary mahita fanamby toa nofaritanao na dia eto amin'ny tsara 'ole USA aza ny mpanjifa (fa samy tsy eto Indiana izahay. 🙂 Hitako fa manoratra mailaka lava be aho hanazavana ireo hevitra izay mandany vola be amin'ny androko izany. Mazava ho azy fa tsy afaka nanao an'io tetik'asa io ho azy ireo aho 10 taona lasa izay…
OTOH, mahita zavatra tena ilaina aho avy ao. Ny fanerena ahy hanamarina zavatra amin'ny mailaka dia manome tantara lehibe momba ny fanapahan-kevitry ny tetikasa ary manome ahy atiny ihany koa azoko atambatra rehefa vita ity tetikasa ity ary (afaka manantena) manomboka bilaogy indray aho.
Hitako fa ho afaka hanantona tetik'asa mitovy amin'izany aho ary ho afaka hampiasa indray ny zavatra nosoratako tamin'izy ireo nanamarina ny lalana nalehako.
Anisan'izany ity ny mpanjifako dia tena vonona ny handray ny làlan-kalehako ary mamela ahy hanazava zavatra fotsiny ary hanaiky azy ireo fa tsy hiady amiko amin'ny tolo-kevitro. Tsara vintana aho amin'izany, tsy toa anao indraindray.
JMTCW ihany. 🙂
27 Jan 2008 amin'ny 4:53 PM
Ary koa, milaza ianao fa ratsy ny hoavin'ny tambajotra sosialy nefa manamafy ianao Indiana Kely. Moa ve tsy tena miezaka ny hiteny ianao fa ny tambajotra sosialy vaovao dia mila fatorana iraisana matanjaka ary raha ny aminao dia ny jeografia sy ny kolontsaina (somary) ifampizarana?
Ny raiko dia tao anatin'ny tambajotra sosialy an-tserasera efa ho 15 taona izao. Antsoina hoe lisitra mailaka ho an'ny olona izay (mazàna ankehitriny no manana) manana maodely manokana sy maodely môtô izay novokarina tany Etazonia nandritra ny 3 taona ary mbola tsy novokarina nanomboka tamin'ny taona 1991. Ny tambajotran-tserasera dia matanjaka noho ny tranonkala rehetra- tambajotra sosialy mifototra izay mbola hitako (tafiditra ao amin'ny Facebook), ary voalamina samirery sy tantanana amin'ny mailaka izy rehetra. Matanjaka tokoa ka nanao famoriam-bahoaka isan-taona ary toerana vitsy ihany ary toerana 2 manodidina an'i Etazonia tao anatin'ny 4 taona lasa. Ka ny tambajotra sosialy dia tsy tokony * ho eo an-toerana vao ho matanjaka fa mila fatorana iraisana matanjaka (na dia eo aza ny eo an-toerana dia iray amin'ireo fatorana matanjaka kokoa misy.)
Raha izany, dia andao hieritreritra ianao fa te hanandrana hanangana vondron'olona tambajotra sosialy an-tserasera ho an'ny mpanjifa mpanonta ary aleo lazaina fa manana zana-bola iraisana ny mpanjifa (angamba na dia ny moto aza.) Ahoana ny fomba hanaovanao azy raha manome ny hevitrao ianao fa ny tambajotra sosialy dia mampalahelo?
28 Jan 2008 amin'ny 12:54 PM
Ataoko fa tsy nazava ny hevitro. Ny tanjoko dia ny tambajotra sosialy "MASS" ho tsy fahombiazana - fa ny tambajotra sosialy "MICRO" - ireo izay manana tanjona tena voafaritra na mpihaino kendrena dia hitombo hatrany. Tonga lafatra ny ohatra asehonao amin'ny zotram-bisikileta iraisana - hitako tanteraka ny tambajotra sosialy tena kendrena izay hahomby.
Amin'ity tranga ity, ny ohatra nataoko dia ny fananganana tambajotra sosialy faobe ho an'ny mpamakiny. Malalaka loatra ny lohahevitra iray ary tsy misy fotoana ifantohana amin'ny vondrona, lohahevitra, olana, ary koa ny jeografia.
Ireto mpampita vaovao ireto dia mieritreritra fotsiny hoe 'Tambajotra sosialy' no buzz manaraka ary mila mandefa iray izy rehetra. Ho resy tsy hahomby izy ireo!
Eto Indianapolis, misy IndyMoms sy IndyPaws… tambajotra sosialy roa izay mifantoka amin'ny lafiny jeografika sy ny lohahevitra… ary samy manao zavatra mahafinaritra avokoa.
27 Jan 2008 amin'ny 5:15 PM
Heveriko fa iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny haino aman-jery faobe tsy mahita ny teboka amin'ny Internet dia http://www.honeyshed.com. Voalaza fa miantsena amin'ny MTV ny fiantsenana an-trano. Hoy aho booo.
Ny fahatsiarovan-tena amin'ny haino aman-jery dia tsy manapaka azy amin'ny Internet fotsiny, mora loatra ny mamono azy sy mandahatra azy. Manontany tena mihitsy aza aho ny amin'ny fahaizan'ny tranonkala sosialy satria ny API misokatra ao amin'ny facebook sy ny toeran'ny mpampiasa lehibe dia nahatonga azy io ho tany masaka ho an'ny mpandraharaha hanararaotra izany.
Marketing amin'ny orinasa kely
27 Jan 2008 amin'ny 7:23 PM
Lahatsoratra mahaliana. Tena afaka milaza aho fa efa nitory toriteny nitovy nandritra ny fotoana kelikely.
Ny fanamby lehibe dia ny fomba fifandraisan'ny olona ary na dia eo aza ny maha-olona tia olona ny olombelona, ​​dia mbola mila zavatra iraisana izy ireo ary mety ho ara-jeografika na mety ho ara-pinoana, ara-poko, lohahevitra, fanabeazana na hafa. Ireo tambajotram-pifandraisana lehibe toa ny MySpace sy Facebook dia tsy mitarika an'io fahita iraisana io ary noho izany dia voatendry amin'ny toerana faharoa izy ireo ary mila mipoitra ireo tambajotra vaovao hamahana ny fanamby ifotony.
Ny fanamby faharoa dia ny fampahalalana any ivelany be loatra amin'ny habetsahana ary kely loatra ny kalitaony satria tsy misy ny lohahevitra 'editera' na 'manam-pahaizana' mametraka ny atiny. Tsy hitranga izany rehefa miha kely sy mifantoka kokoa ny tambajotra ary noho izany dia mifantoka kokoa ny vaovao ary antenaina ho voasivana kokoa satria heverina fa olona manana fahalalana mifandraika ihany no mandray anjara.
Misaotra amin'ny lahatsoratra.
28 Jan 2008 amin'ny 12:55 PM
Tsara apetraka, SBM! Heveriko fa ireo tranonkala izay manao tsara dia tarihin'ny tonian-dahatsoratra na mpitantana izay mifantoka amin'ny lohahevitra sy manentana ny mpikambana!